Dawalada Suudaan oo la wareegtay hantida Xisbigii Cumar Xasan Albashiir. - Hargeele - Wararka Somali State
January 9, 2020 151
Maxamed Alfaaqi oo kamid ah golaha sare ee isbadal doonka suudaan ayaa sheegay, inay dawlada cusub ee dalka suudaan ay lawareegtay guud ahaan hantidii Xisbigii Cumar Albashiir National congress.
Maxamed Alfaaqi ayaa sheegay in 4 TV iyo Jaraa’id iyagana laxanibay lakiin Mulkiilayaasha Warbaahintu ay Cabasho soo gudbisan karaan.
Sidookale, Diyaaldiin bilaal oo ah Maareeyihii Jaraa’idka Alsuudaani islamarkaana kamid ah dadka hantida lagala wareegay ayaa yidhi:- “anagu cidna lacag taageero ah kamaanaan qaadan,tallaabadana Waa mid xoriyada Saxaafada iyo hantida warbaahinta lagu beegsanayo”.
Wasiirka maaliyada dalkaasi suudaan ayaa isna dhankiisa sheegay in Hantida haya’da diini ah ee alquraanul kariim society lagu wareejinayo Xarumaha diimaha dalka.
Xukuumada oo gar’gaar gaadhsiisay dadkii roobku saameeyay.